अछतेदेखि बिहुँ नरेठाटीसम्म सुरुङमार्ग अध्ययन हुँदै - Safal Awaj Safal Awaj
विचार / वार्ता
अछतेदेखि बिहुँ नरेठाटीसम्म सुरुङमार्ग अध्ययन हुँदै
असार ८ गते २०७९ मा प्रकाशित
गलकोट, ८ असार । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गतको बागलुङ खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन थालिने भएको छ । लोकमार्ग बागलुङको काठेखोलास्थित अछतेदेखि बिहुँ गलकोटको नरेठाटी सम्मको सुरुङ मार्ग अध्ययन गरिने भएको छ ।
यसका लागि संघीय सरकारले रु. ५० लाख बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि रु. ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देबेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि २४ नयाँ सुरुङ सम्भाव्यताका लागि नयाँ आयोजना छनोट गरेको छ । ती मध्ये मध्यपहाडी लोकमार्गको अछेते–गलकोट खण्डको सुरुङमार्ग समावेश भएको हो । गत फागुनमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पौडेलले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलसँग छलफल गरी बागलुङको अछेत–बिहुँ देखि गलकोटको नरेठाटीसम्मका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि योजनामा समावेश गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा संभाव्यताको काम अगाडी बढ्ने उनले जानकारी दिए। अछेते, बिहुँ घोडाँबाधे, नरेठाँटी हुँदै गलकोट पुगेको सडकमार्गमा शुरङमार्ग बनाउदा यात्रा बरिब डेढ घण्टा यात्रा छोट्टिनेछ ।
बजारमा मल पाइएन, पानी परेकाले बीउ रोप्न थालियो : किसान
नेपालमा लगानी गर्न अष्ट्रेलियालाई चेम्बरले गर्याे आग्रह
काठमाडाैंकाे सडकमा खानेकुरा बिक्री गर्न निषेध, होटल रेष्टुराँकाे खाद्य परिक्षणलाई तिव्र पारिने
सबैको लघुवित्तले दियो ह्याण्ड वाश, हर्पिक र फिनेल बनाउने तालिम
काठमाडौं, १५ असार । प्रत्येक वर्ष असार १५ गते मनाइने धान दिवसका अवसरमा आज खेतमा…
महोत्तरी, १५ असार । पानी परेपछि महोत्तरीका किसान धान रोपाइँमा ब्यस्त छन् । लामो समय कुर्दा…
पोखरा, १५ असार । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सरकार कृषिलाई आधुनिक…
असार १४, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानीका लागि अष्ट्रेलिया समक्ष आग्रह गरेको…
सम्पर्क नं :०६१-५८८९१३
वरिष्ठ संम्वाददा :बिजय आचार्य
मार्केटिङ :सुनिल कुमार थापा
प्रशासन : अशोक तामाङ
क्रियशन : सरोज श्रेष्ठ
डिजाइन : मिरा सिँह / प्रभा पौडेल